Mark Lawrenson oo shaaca ka qaaday saadaashiisa Chelsea FC v Man United
Home Horyaalka Ingiriiska Mark Lawrenson oo shaaca ka qaaday saadaashiisa Chelsea FC v Man United
Mark Lawrenson ayaa taageeraya labadaba kooxaha Chelsea FC iyo Manchester United si ay u ciyaaraan barbaro 1-1 ah kulankoodii Premier League ee ka dhacay Stamford Bridge.
Man United ayaa kulankan hogaaminaysa iyada oo isha ku haysa in ay sii wado qaab ciyaareedkeedii fiicnaa ee ay dhawaanahan ku jirtay Premier League iyada oo ujeedkeedu yahay in ay sii wado tartanka ay kula jirto kooxda hogaanka heysa ee Manchester City.
Red Devils ayaa 3-1 uga badisay Newcastle United kulan ka tirsan Premier League isbuucii hore ee la soo dhaafay.
Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa haatan ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka waxayna 13 dhibcood ka hooseysaa kooxda hogaanka heysa ee Manchester City.
Dhanka kale, Chelsea FC ayaa ku jirta kaalinta shanaad iyadoo lix dhibcood ka dambeysa Manchester United.
Previous articleBarcelona oo xiiseynaysa daafaca kooxda inter Alessandro Bastoni.
Next articleYussuf Poulsen oo sheegay in Rb Leipzig ku Riyoodaan ku guuleysiga Horyaalka Chermany.